#စာရေးသူတုန်းကအိမ်မှာစတင်လေ့ကျင့်ပါတယ် – မြေဇင်း သမထဝိပဿနာ
ပထမ စစ ချင်း ဝါယူ ၅၀ လောက် စမှတ် ဖြစ်ပါ တယ်…ဟိုး အရင်က ၅ မိနစ် ကနေ စပါတယ်… ဘယ်လို စတုန်း ဆိုတော့…… ငါ့စိတ် ကို ဒီ ၅မိနစ် အတွင်း ဘာမှ မတွေး အောင် မှတ်မယ် ဆို ပြီး alarm ကို ၅မိနစ် ပေးထါးပြီး လေ့ကျင့် ပါတယ်..အဲ့ဒီ ကနေ ၁၅ မိနစ် တိုး မှတ် ပါတယ်… ထိုမှ တဆင့်.. မိနစ် ၃၀ ပေါ့…တဆင့်ချင်း တိုးတိုး သွားပါတယ်…စာရေးသူ ၏ စိတ် အတွေး က ဘယ် လောက် များသလဲ အိပ်တာ တောင် ဘယ်လို အိပ်တာ လဲ ဟင် ဆို ပြီး လူတွေကို လိုက်မေး ရတဲ့ အထိ အတွေးကြော အလွန် ရှည်လွန်းသူပါ…စာရေးသူ လောက် ဘယ် သူမှ ဆိုးမည် မထင် ပါ… ထို့ ကြောင့် သည်ပင် လျှင် မြေဇင်း နည်းစနစ် ဖြင့် ဝါယူ ဝါမှတ် ပြုလုပ် ခြင်းသည် စာရေးသူ နှင့် အလွန်ကိုမှ သင့်တော်သော နည်းစနစ် ဖြစ်ခဲ့ရ ပါသည်။ အိမ်တွင် လေ့ကျင့်စဥ် တနေ့ကို နဲနဲခြင်း ဆီ တိုး တိုး လာ ရာ မှ တ နေ့ ကို ၆နာရီ ၇နာရီ အထိ မှတ်ဖြစ် သွားသည်။ နာရီ ရှည် ဆက် တိုက် မဟုတ် ပါရှင့်…တခါ ထိုင် တနာရီ ပါရှင့် ဝါယူ ၇၀၀ လောက် ရ သည်။ ဤ သည်ကား ရိပ်သာ မဝင်ခင် အတွေ့အကြုံတည်း..ရိပ်သာ ဝင်ပြီးနောက် သိလာရသည်ကတော့ ဝါယူဆိုတာ သန့်သန့် လေး ကို ယူတာပါ ဆိုတာ ပဲ..ဒီတော့ စာရေးသူ အခု အားထုတ် နေပုံလေးကို မျှဝေ ပေးပါ့မယ်… ရှင် #မိမိအိမ်မှာပင် အားထုတ်လို့ ရပါသည်။#ဘုရားဆွမ်း ၊ #ဆီမီး၊ #ရေချမ်း၊# အမွှေးတိုင် ကပ် လှူပါ #ကိုယ်လက် သန့်စင်ပါ #မျက်နှာ စည်း ပုဝါ ကို စာရေးသူ ပုံမှာ ပြထား သည့် အတိုင်း မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်သည့်အရာကို သုံးနိုင်ပါသည်။ #အရောင်သည် အလင်း မပေါက် နိုင်သော အရောင်ဖြစ် လျှင်ပိုကောင်းပါသည်။ #မျက်နှာစည်းကို အလင်းမပေါက်ရုံသာ အသုံးပြုတာဖြစ် ခြင်းကြောင့် မျက်စိကို ထိခိုက်စေနိုင်လောက်အောင် စည်းထားစရာမလိုပါ။
#ပြင်ပ အလင်း မဝင်ရင် ရပါပြီ# ပြင်ပ အလင်း မဝင်ရောက်စေရန်နှင့် အခြားသော အသံစသော အရာများကြောင့် မျက်လုံးရုတ်တရပ် မဖွင့်ကြည့်မိရေးကို ရည်ရွယ်၍ အသုံးပြုခြင်းကြောင့် မိမိ တို့၏ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့် လိုက်လျော ညီထွေ ဖြစ်စေသော အရာ ဘယ်ဟာ မဆို အသုံးပြု လို့ရပါ သည်။#ဤနည်းစနစ် ၏ #အသက်သည် မျက်နှာစည်း ပုဝါစည်းခြင်း တခုလည်း အပါအဝင် ဖြစ် ပါသည်။ #အသေးစိတ်ကို အရှေ့post များတွင် စာရေးသူ ပေးထါး ပါသည် ။ #ပရိကံယူပါမည်။ #၅ပါး၊#၈ပါး၊#၉ပါးစသဖြင့် မိမိတို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာ သီလဆောက်တည်ပါ။#မေတ္တာပို့ပါမည်။ #ကိုယ်စောင့် ကမ္မဌာန်း ပွားပါ မည်။ ပွားများပုံ တင်ပုလ္လင်ခွေ ထိုင်ပြီး လက်ခြင်း ထပ် ခေါင်း၊ ခါး ဖြောင့်ဖြောင့်ထား ..ပထမဆုံး မေတ္တာကို စိတ်ထဲကနေပွားပါမည်။ ငါသည် ဘေးရန် ကင်းရပါလို ၏ ငါဘေးရန် ကင်း သကဲ့ သို့ ငါ၏ ကိုယ်စောင့် နတ်၊ အိမ်စောင့် နတ်၊ ခြံစောင့် နတ်၊ လမ်းစောင့် နတ်၊ ရပ်ကွက်စောင့်နတ်၊ မြို့စောင့်နတ် ၊ရွာစောင့်နတ်၊ နိုင်ငံစောင့်နတ်၊ အစိုးရသော မင်းများတို့ သည်၎င်း၊ မိဆိုင်၊ဖဆိုင်၊ ဘိုးဆိုင်၊ ဘွားဆိုင်၊ ကွင်းဆိုင်၊ နယ်ဆိုင်၊ ပယ်ဆိုင် နတ်အပေါင်းတို့သည် ၎င်း၊ အရပ်၄ မျက်နှာ ကို စောင့်ရှောက် လျှက် ရှိသော နတ်မင်းကြီး ၄ပါးတို့ သည်၎င်း၊ သာသနာ စောင့်နတ်၊ လောကစောင့်နတ်၊ ကမ္ဘာ စောင့်နတ် အပေါင်းတို့သည်၎င်း၊ ငရဲ သနင်း ယမ မင်းကြီး သည် ၎င်းနတ်တို့သနင်း သကြား မင်းကြီး သည်၎ င်း ၃၁ ဘုံ၌ ကျင်လည် ကြကုန် သော သတ္တဝါ များ အားလုံး တို့ သည်၎င်း ကျန်းမာ ကြပါစေ ချမ်းသာ ကြပါစေ။ ဘေးရန် ကင်းရှ င်းကြ ပါစေ။ (စိတ်ထဲကသာ ပွားရမည်) (၅မိနစ်)။
#ဗုဒ္ဓါနုသတိကို ပွားမည်။ (အရဟံ) လို့ စိတ်ထဲ မှ ရွတ် ဆိုပြီး မိမိကြည် ညိုရာ ဘုရား ပုံတော် တ ဆူဆူကို မျက်စိ၌ ထင်မြင် သလိုမျိုး စိတ်ထဲ ကနေ အာရုံယူရပါမည်။စိတ်ထဲကနေပဲ ၁တောင်အ ကွာ အဝေး လောက်မှာ အာရုံ ယူထားသော ဘုရားပုံ ကို စိတ်ညွတ်၍ (အရဟံ) ဟု စိတ်ထဲကနေ ရွတ်နေ ရပါ မည်။ (၅ မိနစ်) စိတ် ကတော့ ဘုရားပုံ တော် ပေါ် မှာသာ ထား ရ ပါမည်။ #မေတ္တာ ကမ္မဌာန်းပွားမည်..ငါသည်ဘေးရန်ကင်းရပါလို၏ ငါဘေးရန်ကင်းသကဲ့သို့ အသက်နှင့်ခန္ဓာကိုယ် အထင်အရှားရှိကြကုန်သော ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါ များ အားလုံး တို့သည်လည်း ကျန်းမာ ကြပါ စေ ချမ်းသာ ကြပါစေ ။ဘေးရန်ကင်းရှင်းကြပါစေ။ (၅မိနစ်) စိတ်ထဲ၌ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ခံစား မှု တခု ရရှိ သည်အထိ ပွားများ ရပါမည်။#သေခြင်းတရားပွားမည်။ခပ်သိမ်းသော သတ္တဝါ တို့သည် တဖွဲဖွဲ သေနေကြ သလို ငါသည်လည်း သေရဦးမှာပါတကား၊ သေရချည်သေး၊ သေရချည်သေး၊ ငါ၏ ရှင်ခြင်းသည် မမြဲ သေခြင်းသာ လျှင် မြဲ၏ ။ (၅မိနစ်)စိတ်ထဲ၌ သာ ပွားများနေရမည်.. မြင် သာသော သေနေသောရုပ်အလောင်းများ အားအာရုံပြု၍လည်းပွားများလို့ရပါသည်.. မပြုတက် လျှင်လည်း ငါကတော့ သေချာပေါက် သေကိုသေမှာ သေချာနေတာပါလားလို့ စိတ်ထဲကနေ ပွား ယူလို့လည်းရပါသည်။
#အာနာပါန ကမ္မဌာန်း ပွားမည်။ တင်ပုလင် ခွေထိုင် လက်နှစ် ဖက်ကို ကွေးထားသော ထူးပေါ်မှာ လက် ဖဝါးလေး တွေကို ဖြန့်ထား… ပြီးရင် စိတ်ကလေး ကို နှာသီး ဝကို ပို့ထား ….. ဝင်လေ ကိုပဲ မှတ် ဝင်သည် (၁)ဝင်သည် (၂)ဝင်သည် (၃)ဝင်သည် (၄)ဝင်သည် (၅)ဝင်သည် (၆)ဝင်သည် (၇)ဝင်သည် (၈) (၈)ရောက်လျှင် လက်မလေးချိုး နောက် တခါ ၁က ပြန်စ (၈) ရောက်ရင် လက် ညိုးလေးချိုး … ဒီလိုနဲ့လက် ၁၀ချောင်းကုန်သည်အထိ မှတ်.. အဲ့လို ကုန်သွား ပြီဆို လျှင် (၁၀)ဝါ ရပြီလို့ခေါ်တယ်… ဒီ (၁၀)ဝါကို ဘယ်နားမှာထားမလဲဆိုရင် မိမိရဲ့ လက်ကောက်ဝတ် မှာ ပုံထား.. .. နောက် တခါ ထပ်မှတ် လို့ ရတဲ့ (၁၀) ဝါရပြီ ဆိုလျှင် နောက်ထပ် တတောင် ဆစ်လေး မှာထား ..ဒီ လိုနဲ့ အဆစ်လေး တွေမှာ ပုံပုံ သွားမယ်… ပခုံး မှာထား၊ နားရွက် မှာထား၊ ချိုဇောင်း မှာထား ၊ ညာဘက် တခြမ်းပြည့် သွားရင် (၅၀) ဝါ ရပြီ ။ ဒီလိုနဲ့ ဘယ်ဘက် အခြမ်းလဲ ထိုနည်း တူစွာထား၊ ခန္ဓာကိုယ် တပတ် ပြည့်သွား လျှင် ဝါယူ(၁၀၀) ရပါပြီ…. အကယ်၍ စိတ်ကလေး သိပ်မထွက်ရင် ၁နာရီ ကို ဝါယူ ၁၅၀ /၁၆၀ လောက်ရ ပါတယ်…. စိတ်ထွက် လျှင် တော့ ၁နာရီ ကို တခါ တလေ ၁၀၀ (သို့) ၅၀ လောက်ပဲရ ပါသည်။ ဤနေရာ၌ မိမိ၏ စိတ်ပြန့်လွင့်မှု မပြန့်လွင့်မှု နှင့်သာ အချိန် အနဲအများ ကွာခြား ပါသည်။ မိမိစိတ်ကို အပြင်ထွက် တာများမများ ဤ သို့ ဝါယူအရေ အတွက် ဖြင့် သိရှိနိုင် လေတော့ ပို၍ ထိရောက် ပါ သည်။ ၁ မှ ၈ အထိ ရေတွက် နေရင်း ၉ သို့ ကျော်သွား လျှင် ၎င်း ၁ မှ ၆ သော် ၎င်း ၇ သော်၎င်း ရောက်မှ စိတ်ထွက်ခဲ့ လျှင်၎င်း ဤ ဝါယူ များကို မသန့် သောဝါယူဖြစ်၍ ရေတွက်ခြင်းထဲ မထည့်ပါဘူး။
ဤသို့ ဝါယူ သန့်သန့် လေးများ ကို သာ အရေ အတွက် ထဲ ထည့်ရ ပါမည်။ ဒီလိုမှတ်နေစဉ် စိတ် ကလေး များကို ဘယ်မှာ ထားရမလဲ ဆိုရင် … (၁)နှာသီးဝလေထိတဲ့နေရာ (၂)လက်ချောင်းလေး များ ကို ချိုးနေသည့် နေရာ (၃) အဆစ်လေး များတွင် ပုံနေ သည့် နေရာ …များတွင် စိတ်ကို ကပ် ထားရပါမည်။စိတ်အလွန်ထွက်တက်သော စာရေးသူလို ယောဂီမျိုး ဆိုလျှင်ဖြင့် ထွက်ချင်းထွက် အဲ့နေရာ ၃ခုက လွဲ ဘယ်မှ မထွက်စေရန် အမှတ်တွေဆီ စိတ်ပို့ထား သည့် သဘောပါ.. အမှန်တ ကယ် ကတော့ တနေရာ ထဲမှာ စိတ်ကလေးကို ငြိမ်ဝပ်နေအောင် သတိလေးနဲ့ ကပ်ထားဖို့ရာ စစ ချင်းမှာ စိတ် တွေ ထွက်တာ များနေ မှာမို့ အဲ့လို လေးမှတ် စေခြင်းပါ.. မိက သမာဓိ လွန်စွာ အား ကောင်းသူဖြစ်နေခဲ့ပါလျှင် နှတ်ခမ်းထိပ်(သို့)နှာသီးဖျား နှာဝ နေရာ လေထိတဲ့ နေရာလေး ကနေ လေကိုသိနေ ပေးနေရပါမည်. ဝင်လေထွက်လေ နောက်ကို မလိုက် ရပါဘူး.ပူတာ အေးတာတွေ မရှုရပါဘူး..သမာဓိထူထောင်နေတာမို့ တနေရာထဲမှာ စိတ်ကလေးကို ငြိမ်နေအောင် စိုက်ထားရုံ ပါဘဲ..စိတ် အရမ်း ငြိမ်လာ လျှင် လေ ပျောက်သွား သလို ဖြစ်တက်ပါသည်.လေပျောက်ပေမယ့် လေဝင်တာထွက်တာကိုတော့ သိနေသည်မို့ အရေအတွက် ကို ဆက်မှတ်နေလို့ရပါသည်။
ဤတွင် သမထ ရှုမှတ်ပုံပြီး၏။ အထူးသတိပြုသင့်သည်များ…. မှာအထက်ပါအစီအစဥ် အတိုင်း အားထုတ်ခြင်း များတွင် နာရီ သတ်မှတ်ချက် များသည် မိမိတို့ အားထုတ်မည့် အချိန်နှင့် ကိုက်၍ မိမိတို့ ဖာသာ အဆင်ပြေသလို သတ်မှတ် အားထုတ် နိုင်ပါသည်။ ပုံသေ မဟုတ်ပါ။ ဤစနစ်တွင် တခု ကောင်း သည်က ဝါယူ ဘယ်လောက် ရအောင် အားထုတ် မယ်လို့ ဆုံး ဖြတ် ပြီး အားထုတ် ကြည့်လျှင် မိမိ ၏ စိတ် ဘယ်လောက် ပြန့်လွင့်မှု ရှိ မရှိကို ဝါယူဝါမှတ် ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် သိနိုင် သည်။ စာရေးသူ တခါ တလေ ဝါယူ ၃၀ လောက်ကို ၁နာရီ လောက် ကြာသွားအောင် အားထုတ် တဲ့ရက် တွေရှိ ပါသည်..စိတ်ထွက်တာ များလျှင် ဝါယူ မရပါ.. အစ ကနေ ပြန်ပြန် မှတ်နေ ရခြင်း ကြောင့် ပါ..ဝါယူ အနည်း အများက အဓိက မဟုတ်ပါ.. မိမိ စိတ် ကလေး အပြင်မထွက်ပဲ ဘယ် လောက်ကြာကြာ မိနေလဲ က အဓိက ကျတာမို့ ဝါယူအပေါ်လည်း မစွဲလမ်းစေချင်ပါ..။
ဤ နည်းစနစ်၏ ပထမ နည်းက သတိမြဲဖို့က အဓိကပါ.. သတိမြဲရာ ပထမာ ဆိုသည့် ဆောင်ပုဒ် လေးအတိုင်း ကျင့်ရမှာပါ။ သတိလေး မြဲလာ ပြီဆိုရင် ဝါယူ တွေ တိုးလာ ပါလိမ့်မယ်…လက်ကို ချိုးခိုင်း ထား သလို ချိုးကို ချိုးရ ပါမည်။ အကျိုး ရှိစေသည့် နည်းစနစ် များသာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ဆရာ သမားများ သင်ပြပေး သည့်အတိုင်း လိုက်နာ ကျင့်ကြံ အားထုတ်ခြင်းသည် ပိုမို ထိရောက် ပါ သည်။ (ကိုယ်တွေ့ပါ )စျေး ဆစ်လျှင်…ထစ်ငေါ့ နေတက် ပါသည်။ (ကိုယ်တွေ့ပါ )#ဆရာ သမားများ အပေါ် ယုံကြည်ခြင်း #တရားတော် အပေါ် ယုံကြည်ခြင်း #မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ခြင်း #ဖဘုရားရှင်ကြီးကို အကြွင်းမဲ့ ယုံကြည်ခြင်း..ဤသို့သော် ယုံကြည်မှု များသည် ခရီး ပန်းတိုင်ကို မြန်စွာ ရောက်စေနိုင်ပါ၏ ..ယောဂီသစ်များအတွက် ပြန်လည် မျှဝေပေးပါသည်ရှင့် ..I love you all ယောဂီအားလုံး တရားတွေ့ချမ်းမြေ့ကြ ပါစေ ရှင့်
#ညီမလေးနှင့် မောင်လေးထံ ပေးသော မေတ္တာစာ
ဘုရား ဖူးမရသောယောဂီများ မေးလေ့ မေးထ ရှိသော မေးခွန်းများ